Iko kunotevera sei kumashure kunotaridzika kunge muna 2018?
Sezvo injini dzekutsvaga dzichienderera mberi dzichishandura mararamiro ehutungamiri uye dzinopa hutsva hwekuvandudza hutsika, vazhinji ve webmasters vanoshamisika kuti vanoda kudyara mukuvaka dofollow backlinks, kana kwete. Muchiedza chekupedzisira kweGoogle Penguin nePanda zvinyorwa, vadzidzisi vepawebsite vane zvinganetseka pamusoro pesimba rekufambiswa kwemasangano akawandisa muna 2018. Ichi chinyorwa chakagadzirirwa kubvisa mafungiro ose pamusoro pesimba re backlink uye kukudzidzisa iwe kuvaka matanho ekudzokorora mune izvi uye gore rinouya.
Backlinks mumaziso emitsva inotsvaga
Kubvira pakutanga kweiyo injini yekutsvaga, backlinks yakave chikamu chekushandura kwavo. Chokutanga pane zvose, vakashandira kuwana zvinyorwa zvitsva uye kuverenga simba rehurukuro. Zvisinei, pakutanga, Google yakarongedza chete nhamba ye backlinks pasina kubhadhara kutarisa kwehuwandu hwezvavanouya. Izvo zvakanyanya zvinyorwa zvinowanikwa mubhuku rewebhu, yakakwirira simba rayo richava mumaziso ezvinjini. Parizvino, backlinks inoshandiswa pakutsvaga zvinyorwa zvitsva kana zvatsvaga pamwe chete nekutangira kwekukamba.
Kudzivirira mabasa ose e spam uye mitemo yekutsvaga mitemo kutyora, Google yakagadzira Mirayiridzo yeWebmaster yaisanganisira yakanakisisa yekuvakwa kwekuvaka maitiro. Mitemo iyi haina kuchinja nguva yakareba. Kunyange zvakadaro, chero webmaster mabasa yakagadzirirwa kushandura nzvimbo dzekutsvaga akakodzera kurangwa neGoogle chirango chikuru.
Nekushanduka kwekutsvaga injini yekuwedzera, mabhizimisi akawanda uye akawanda aitsvaga nzira dzakasiyana dzekuwana backlinks. Vashandi vepaIndaneti vakatsvaga kuwana mhinduro shoma yekuwana nzvimbo dzakakwirira paGoogle SERP. Somugumisiro, mawebsite akasafanirwa kutarisa zvakakosha zvakagadziriswa neGoogle nheyo dzepamusoro kuburikidza nekuita zvinokanganisa kweGoogle Webmaster Guidelines. Yakatanga kutanga kwekukurukurirana kwekubatana kwekutengesa nekutsvaga purogiramu pamusika we digital. Somugumisiro, shanduro yekugadzira injini yekutsvaga yakavhuna humwe hutano hwekuvaka hunobudirira, hwakadai sevakashambadzira, kubudiswa kwemashoko, nyaya yekudhinda, mabhuku ebhubhu, zvinyorwa zvekugarisana kwevanhu, mapurisa emusangano, nezvimwewo.
Nhasi, Google inoda kuti backlinks iwane vhudziro nemuridzi wepaiti kana kuti kwete kupfuura PageRank.
Muna 2012, Google yakagadzira Penguin sargorithm, maererano nezvose zvese zvemashure rekare zvakashandurwa uye mawebsite akavakasika akarangwa. Gore rimwechete Google yakagadzira disavow chigadziro muGoogle Search Console kuitira kuti vhidhiyo webhusaiti vabvise mararamiro avo asina kunaka spammy links pane imwe chete.
Sezvaunogona kuona kubva pakutanga, maonero eGoogle maonero aive ekuti usadzike hukama kuitira kuti uwedzere kushandiswa mukati mejini.Vazhinji vema webmasters vasina ruzivo vakashandura zvisiri izvo mutemo uyu, uye zvikwanganiso zvekubatana zvichibva purogiramu iyi se "Google inopesana nesangano rekugadzirisa kana chivakwa chekubatana hazvikodzeri kuisa mari". Kugadzirisa zvinhu, Google haisi kupesana ne backlinks. Pane zvinopesana, Google inoshandisa backlinks sechinangwa chekuchengetedza chero imwe mimwe mitemo 200. Zvisinei, Google iri kushanda zvakaoma kuvandudza vashandisi tsvaga yekutsvaga. Ndicho chikonzero Google inoramba ichirwisana nekutarisa maitiro ekupa tsvakurudzo chete mawebsite anokosha uye akakodzera kumibvunzo yavo Source .